Haasaa mana murtiitti obbo Baqqala Garbaa dubbatan – Kichuu
HomeNewsAfricaHaasaa mana murtiitti obbo Baqqala Garbaa dubbatan
Haasaa mana murtiitti obbo Baqqala Garbaa dubbatan
Haasaa mana murtiitti obbo Baqqala Garbaa dubbatan “An mana murtii sobaa kanatti shororkeessummaan yeroo sadaffaafin dhiyaadha.”
KMN:- Fulbaana 21/2020
Bakkuma kanatti kan sobaan ragaa narratti ba’amee calqaba waggaa torba lammaffaa irratti immoo himanni keenya adda citee hiikamne. Dambalii uummataa nu booda jiru sodaate dirree qabsoo keessaa nu baasuuf Mootummaan miidiyaalee bitamtuu fayyadamee uummata biratti eenyummaa keenya xureesssee mana murtii akkasiifaa fayyadamee nuhimate.
An amma himata koo hamma tokko ilaalaan ture fakkeenyaaf Bulee horaatti bilbiltee “nafxanyaan nu hin bulchu” jettee dubbatte kan jechu keessa jira.Ammas Kanuman jedha Nafxanyaan nu hin bulchu gonkumaa ol’aantummaan Saba tokkoo fi sirna tokkoo hin mirkanaa’u Afaan tokko eenyummaa tokko biyya kana keessatti kan fudhatu hin jiru.
Warri kaan ol’aantummaaf qabsaa’u nuyi garuu wal qixxummaaf qabsoofna walqixxummaa sabaa fi sabilammii fi sirna demokraasiif qabsoofna kana immoo yoomuu hin dhiisnu. Sirna Abbaa irree isaan yaadan yoomuu itti hin fufu nuyi namoota muraasa kan as jirru garuu dhaloota Abbaa irree hin fudhatne horatneerra.
Maqaaf manni kun “galma haqaa” jedhama Osoo baaxiin kun afaan qabaatee dubbatee ijoolleen Oromoo meeqa sobaan irratti ragaa ba’amee meeqa akka dharaan itti Murtaa’e hima ture.Ammas nuyi gatii baasna dhiiga Keenyaan baayy’een bilisa ni ba’u.
“warra ilma koo birriin bitamee ajjeese mana hidhaa ciibsanii qallabu boru bilisa jedhanii gadi dhiisu.